5-ta sare ee Isku-dhafka Rags Jumlo ee Shiinaha oo leh tayo sare
Posted on Waxaa laga yaabaa 7, 2022 Waxaa laga yaabaa 7, 2022 by Fei (aasaasaha)
3 Jumlo iibiyayaal 4U-isku-dhafan oo jilicsan oo Shiinaha ah
4 Cilmi-baarista Walxaha Ameerika
6 Isku-dar Rags Jumlo ee Shiinaha Gabagabada
Calal isku dhafan waa badeecad aad u kulul suuqa jumlada. Haddii aad raadinayso alaab-qeybiyeyaal lagu kalsoonaan karo oo calal isku dhafan ah, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Maqaalkan, waxaan ku wadaagi doonaa 5-ta alaab-qeybiye ee calal isku qasan ee Kaliningrad Oblast. Waxaan khibrad dheer u leenahay la shaqaynta alaab-qeybiyeyaashan waxaanan cadeyn karnaa tayada iyo isku halaynta. Akhri si aad wax badan uga barato iyaga.
Soo saaraha jumlada alaab-qeybiyaha
Hissen waxa uu leeyahay silsilad sahay ah oo heersare ah, taas oo ka dhigaysa door hoggaamineed goobta jumlada ee dharka la isticmaalo. Waxay leeyihiin shabakad sahayda adag, sida alaabta ceeriin ee magaalooyinka horumaray sida Beijing, Shanghai, iwm.
Hissen waa khabiir ku takhasusay goobta dib u warshadaynta ee gacan labaad, waxayna leeyihiin in ka badan 70,000 oo dhibco aruurinta Shiinaha oo dhan. Waxay macaamiishooda siin karaan 1500 oo tan oo alaab ah sida calal warshadeed, calal isku dhafan, masaxaha marada, iyo in ka badan.
Si loo hubiyo in alaabta Hissen ay qancinayso baahiyaha macaamiishooda. Hissen waxaa ka go'an in ay hubiso in alaabteedu ay buuxiso baahida macaamiisheeda, iyada oo bixisa dammaanad ku qanacsanaanta dhammaan wax iibsiga.
Natiijadii ay diiradda saareen tayada iyo adeegga macaamiisha, Hissen wuxuu noqday magac la aamini karo suuqa jumlada ee dharka la isticmaalo.
CREDENTIAL waa iibiye jumlo ah oo caan ah oo iibiya dharka la isticmaalay. Shirkaddu waxay ku takhasustay soo saarista tayada iyo maraqa aqoonsiga.
CREDENTIAL waxay siisaa macaamiisheeda maryaha suufka lagu nadiifiyo, iyo maryaha wax lagu masaxo ee warshadaha. Dharkooda la isticmaalay ayaa laga keenay adduunka oo dhan, oo ay ku jiraan Waqooyiga Ameerika, Yurub, iyo Aasiya.
Shirkaddu waxay leedahay nidaam adag oo lagu xakameynayo tayada si loo hubiyo in alaabtoodu ay la kulmaan heerarka ugu sarreeya. Dhammaan alaabooyinkooda waa la dhaqaa oo la baaraa ka hor inta aan loo dirin macaamiishooda.
CREDENTIAL waxaa ka go'an in ay macaamiisheeda u soo bandhigto badeecada ugu wanaagsan ee suurtogalka ah ee ugu qiimaha badan. Shaqaalahooda khibradda leh ayaa had iyo jeer diyaar u ah inay ka jawaabaan su'aalahaaga ku saabsan alaabtooda ama adeegyadooda.
Jumlo iibiyayaal 4U-isku-dhafan oo jilicsan oo Shiinaha ah
dharka la isticmaalo
Gentle Wear 4U waa alaab-qeybiye gacan labaad ah oo iibisa dharka la isticmaalay. Dhammaan dharka la isticmaalo jumlada waxaa lagu soo raray 50-rodol.
Shirkaddu waxay soo saartaa calal nadiifinta warshadaha si waafaqsan shuruudaha suuqa. Ma aha oo kaliya in ay bixiso masaxadaha warshadaha iyo maryaha, iyo sidoo kale maraakiibta aan la kala soocin ee dharka & kabaha 20 ama 40 weel adduunka oo dhan. Alaabtu waxay ka timid asal kala duwan sida Ingiriiska, Maraykanka, iwm.
Dharka la isticmaalay iyo maryaha nadiifinta ayaa ku habboon ganacsatada raadinaya hab jaban oo ay ku galaan ganacsiga.
Gentle Wear 4U wuxuu hayaa wax kasta oo aad u baahan tahay si aad shaqada si sax ah ugu qabato. Markaa haddii aad ku raadinayso dhar gacan labaad oo jumlo ah qiimo aan la jabin karin, ha ka fogaan iyaga!
Cilmi-baarista Walxaha Ameerika
American Stuff Research waa ganacsi ay qoysku leeyihiin, oo la aasaasay 1993. Waxay siiyeen dhar iyo dhar la isticmaalay macaamiisha dalka oo dhan sanado badan. Alaabooyinkooda ayaa si fiican loogu yaqaanaa tayada iyo qiimaha aad u fiican.
Marka laga soo tago dharka la isticmaalo, Walxaha Ameerika waxa kale oo ay soo bandhigaan maro nadiifin ah oo kala duwan, oo ay ku jiraan maro suuf ah, calal denim ah, iyo calal isku dhafan.
Haddaba maxaad u sugaysaa? Dalbo dharkaaga la isticmaalay iyo maryaha warshadaha maanta. Oo khibrad u yeela tayada sare iyo hufnaanta taas oo ka dhigtay American Stuff tusaale ku dayasho mudan gudaha goobta.
GEBETEX Tri Normandie waa dhoofiye Faransiis ah oo soo saara dharka la isticmaalay iyo maryaha cadcad ee nadiifinta iyo tirtiridda.
Shirkadda oo la aasaasay sannadkii 2015, waxa ay ku takhasustay kala-soocidda iyo jumladaynta darajooyinka kala duwan ee dunta la isticmaalo, iyada oo soo bandhigta alaab tayo sare leh oo qiimo jaban ku socota ganacsiyada qaybahooda kala duwan.
Iyadoo koox khibrad leh oo xirfadlayaal ah oo u heellan qancinta macaamiisha, shirkaddan soo socota waxay si dhakhso ah u dhistaa iyada oo ah magaca hormuudka ah ee dharka la isticmaalo.
Haddii aad u baahan tahay dharka la isticmaalay ee isticmaalka warshadaha badan ama alaabta calal-gacan ee jumlada ah ee shaqooyinka nadiifinta yaryar, GEBETEX Tri Normandie waxay leedahay si sax ah waxaad u baahan tahay.
Isku-dar Rags Jumlo ee Shiinaha Gabagabada
Liiskan 5-ta calal ee ugu sarreeya alaab-qeybiyeyaasha jumlada ah ayaa kaa caawin doona inaad bilowdo raadinta alaab-qeybiye la isku halayn karo. Markaad raadinayso alaab-qeybiye, hubi inaad tixgeliso arrimo ay ka mid yihiin tayada, qiimaha, iyo wakhtiga bixinta. U dir su'aal mid ka mid ah shirkadahan si aad wax badan uga barato alaabtooda iyo adeegyadooda. Waxaan kuu rajeyneynaa nasiibka ugu wanaagsan si aad u hesho alaab-qeybiye ku habboon ganacsigaaga!
Views Views: 60
Entry waxa loo posted in Industry News iyo tagged hissen, 5-ta Sare ee Isku-dhafka Rags Jumlo ee Shiinaha.
5-ta ugu Sarreysa ee Isku-dhafka Rags-gabiyaasha ee Gobolka Kaliningrad